Iindaba -Yintoni enye onokuziqhelanisa nayo wedwa, ngaphandle komatshini webhola yentenetya, kwaye kungekho ludonga?
Yintoni enye onokuziqhelanisa nayo wedwa, ngaphandle komatshini webhola yentenetya, kwaye kungekho ludonga?
Abadlali abaninzi begalufa babuza: Yintoni enye onokuyenza ngaphandle komatshini wokudubula itennis?
Indlela yokusebenzisa “iinombolo ezintathu”
1. Ukuhamba ngokukhawuleza
I-Tennis ngumdlalo wokwenene phantsi kweenyawo. Ngaphandle kwesantya esihle, intenetya ayinamphefumlo. Ukuziqhelanisa nesantya ngokuqinisekileyo kukhetho olufanelekileyo xa uwedwa. Lungiselela ngokulula ezinye izixhobo oza kuzidlala.
Ngeendlela ezithile zokuziqhelanisa, nceda ujonge kumanqaku ezembali: Ukuziqhelanisa nokuqina kwethennis, isantya, kunye nesantya, kukufundisa indlela yokusebenzisa ileli yentambo kunye neebhendi zelastiki!
Ungathini ukuba akukho mntu wondla ibhola kwaye ufuna ukuziqhelanisa nokubetha? Ungaziphosa ngaphandle!
Nyathela phambili, jika umzimba wakho ulungiselele ukudubula kwaye ugcine esi sikhundla, phosa ibhola iidigri ezingama-45 phambi kwakho, emva koko ujikeleze ibhola ukuze uyibethe.
Kukwanjalo kwi-SLR, ukunyathela ngemilenze ngaphandle-ukujika ukugcina indawo elungeleyo-ukuphosa ibhola. Ngokungafaniyo nesandulela, i-SLR iphosa ibhola ukusuka ezantsi kwerakethi.
Yeyona nto inzima kakhulu ukuphosa ibhola umva umva, kwaye kunzima ukugqibezela isenzo esihambelanayo sokuphosa kunye nokubetha ngexesha elifutshane.
Nyathela phambili, jika amagxa akho kwaye ulungiselele ukubetha ibhola. Kuyacetyiswa ukuba ubambe irakethi ngesandla esinye ngesandla sasekhohlo kwaye uyiphose ibhola ngesandla sasekunene. Kuba isandla sasekunene silungile phambi komzimba kwaye sisandla esiphambili, ayisiyiyo intshukumo kuphela egudileyo kodwa nomgangatho wokuphosa uphezulu. Emva kokuyilahla ibhola, bamba izandla uqhwabe izandla ubambe irakethi uyijikeleze.
Ukuba ibhola iphoswe ngaphandle kokuqhwaba izandla, ukuphoswa nokujikiswa kwebhola kuya kuthintelwa.
Emva kokuqonda indawo yokuzijula ​​ngokwakho kunye nokudlala ngokwakho, ungazama imithambo enjengokuhamba ngasemva okanye ukuphakamisa okanye ukuphosa ibhola ngokulandelelana kwayo kunye nebhakkhand.
3. Beka ibhola
Beka ibhola kwibhanti lomnatha (uyame kwicala lenkundla yakho), mayiyeke ibhola iwele ngokwendalo ukuze ilinganise imeko yomdlali welinye icala ngokubeka ibhola encinci, emva koko uthambise irakethi kancinane, uyibambe ngobunono ibhola uye kuyo ukuya kufutshane nomgca womnatha Kwiibhaskithi ezimbini ezincinci zebhola, imvakalelo yesandla yokuyibuyisela umva ibhola isenziwa kakhulu.
4. Ukomeleza imithambo
Ukuma ngonyawo olunye kunye neekomityi ezixineneyo esinqeni esisezantsi kunesiphumo esihle soqeqesho ekuphuculeni ibhalansi.
Uqeqesho lokuphosa ibhola oluqinileyo alunakukhulisa kuphela amandla asemgangathweni womzimba, kodwa lunokuba namava angcono wokuziva uqhubela phambili kwaye ubetha ibhola.
Uqeqesho lweKettlebell lolunye lweyona mithambo ilungileyo yokufumana amandla ombane ukusuka kumzimba ongezantsi uye kumzimba ophezulu.
Unokuqeqesha amandla apheleleyo emilenze.
Sebenzisa umatshini ophawulweyo ukuzilolonga, qhubeka utshintsha iindlela ezahlukeneyo zokuziqhelanisa, kwaye uphucule ukukhawuleza kweenyawo.
Xa uwedwa, unokuzama nokubetha ibhola okanye uyiphose kwaye uyigange, engenakuphela nje ngokwenza ukuba ibhola iyaziva kodwa ikwasebenza njengesakhono esihle.
Emva kokuphosa ibhola emoyeni, yolula iingalo zakho, yima intloko yerakhethi nkqo, vala irakethi ebusweni, uyihambise irakethi phantsi ngokungqinelanayo nesantya esiwayo kunye nomkhondo webhola. Okokugqibela, jika isihlahla sakho malunga nokuma kwesifuba kwaye ubeke iRacket ebusweni ukuze ibhola iphantse ukuwa kwirakhi ngaphandle kokubhabha.
Ixesha lokuposa: Mar-16-2021